Ukunyibilikisa iAluminiyam yokuTyibilikisa ukuFakelwa kweZiko leZiko leVenkile abaThengi base China
I-HLQ Induction Equipment Co inelayini epheleleyo yeTilting Crucible Melting Induction Furnace yokunyibilikisa iAluminiyam, ialuminium alloy, njl. Iziko lokunyibilikisa linikezelwa kumanqanaba obushushu ukusuka kuma-600 ukuya kuma-900 ℃ ngumoya opholileyo (max 1700 ℃ ngamanzi apholileyo).
I-aluminium yokucoca i-aluminium yokufakelwa isetyenziselwa ngokubanzi ukunyibilikisa kunye nokugcina inkqubo efudumeleyo ye-Low melting point-non-ferrous metals, ezinjenge-aluminium, ubhedu, i-zinc, i-lead, i-cadmium kunye nezinye iialloys.
Zilungele zonke iintlobo zokuphosa i-aluminium alloy, i-cast cast, i-piston, ibhlokhi yeenjini, amavili e-aluminium ezithuthi, njl njl.
Iziko lethu lendawo yokunyibilika kweCalcible linikezelwa kumanqanaba obushushu ukusuka kwi600 ℃ ukuya kwi-900 ℃ hayi amanzi apholileyo.
I-HLQ Induction Equipment Co iyile uyilo, ubunjineli, kunye nokwenza izixhobo zeTilting Crucible Melting Induction ukusukela nge1996.
Ukulungisa uhlobo lwe-aluminium yokunyibilikisa isithando somlilo, kukhulula i-aluminium engamanzi kumjelo wokuphambukisa, nako kunokusetyenziselwa ukwenza i-aluminium.
Kukhuselekile kwaye kuthembekile ukuthulula okusetyenzisiweyo kweesilinda ze-hydraulic ze-2 ezinesithambisi esiphelisayo kwisimo sokutsala.
Izixhobo zisebenzisa i-Ultra yokugcina amandla esakhiwo se-ceramic ukufakelwa. Ukuphulukana nobushushu obuphantsi kakhulu ngenxa ye-insulin efanelekileyo yokufakelwa. Ukwenza ulingano ngokulingeneyo ngokulingeneyo, ukufakwa kwengcingo yesingisi, Ubomi obumbethelelwa ixesha elide, Ukufakwa ngokukhawuleza, ukufakwa ngokulula.
Umgangatho ophezulu wokubethelwa, ukukhawuleziswa kwamandla okubethelelwa ngokukhawuleza, ukusebenza ngokuphezulu kobushushu, ubomi obude benkonzo.
Yenzelwe isandla okanye i-robotic ladling ngqo ekufeni okanye kubumba okanye icinezele ngoxinzelelo oluphantsi lokufa.
Isixhobo se-HLQ Induction Equipment Co sinika i-aluminium i-oven yokubamba ulwelo, esetyenziselwa ikakhulu ukugcinwa kobushushu, myeke nime, i -assassing kunye nokucokiswa kwealloy aluminium etyibilikisiweyo.
Ukusebenza okuphezulu kunye nokugcinwa kwamandla
Ukusebenza ngokuphezulu kobushushu
Umsebenzi ozinzileyo nothembekileyo
iindidi Teknoloji tags I-Aluminium Tilting Crucible Induction yeZiko, Ukunyibilikisa iAluminiyam yokuTyibilikisa iZiko leVenkile, Ukunyibilikisa iAluminiyam yokuTyibilikisa iZiko leVenkile yeVenkile, Ukutsala ifreyimu yeAluminium yokunyibilikisa i-Crucible, Ukutsala ifestile yokunyibilikisa i-Crucible Post yokukhangela
IAluminiyam yokuKhangela yokuYila kwakhona ukuPhindwa kweZiko leVenkile